क्रिस्टिना २३ वर्षको उमेरमा ११ बच्चाकी आमा बनिन् , १०५ बच्चा जन्माउने लक्ष्य ! - Gandaki Diary - Digital News Portal From Nepal
क्रिस्टिना २३ वर्षको उमेरमा ११ बच्चाकी आमा बनिन् , १०५ बच्चा जन्माउने लक्ष्य !
मस्को । रुसकी क्रिस्टिना ओज्टर्क २३ वर्षको उमेरमा ११ बच्चाकी आमा बनेकी छिन् । पहिलो बच्चाको डेलिभरी १७ वर्षको उमेरमा भएको थियो । पछिल्लो १० महिनामा सरोगेसी विधिबाट उनले १० बच्चालाई जन्म दिइन् ।
क्रिस्टिनाका पति ग्यालिप ओज्टर्कले १०५ बच्चा जन्माउने आफूहरुको लक्ष्य रहेको बताए । क्रिस्टिनालाई कति बच्चा जन्माउने भन्ने कुराको मतलब छैन, उनीहरुको परिवार योजना १० भन्दा बढी बच्चाको लागि पनि हुनेछ ।
क्रिस्टिना मस्को निवासी हुन् भने उनका पति ग्यालिप ब्यापारी हुन् । सरोगेसीको माध्यमबाट कति बच्चा जन्माउन सकिन्छ भनेर आफूहरुले जान्न चाहेको पनि क्रिस्टिनाले बताइन् । सरोगेसीबाट जन्मिएको उनीहरुको पहिलो बच्चा मुस्तफा थिए ।
क्रिस्टिनाका अनुसार सबै बच्चाको स्याहारसुसारका लागि अलग अलग डायरी बनाइएको छ । साँझ ६ बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म यो प्रक्रिया चल्छ । यी बच्चाको हेरचाहमा खटिने नानी चाहिँ दैनिक बच्चाको स्याहारलाई लिएर डायरीमा नोट उतार्छिन् ।
क्रिस्टिना सिंगल मदर थिइन् । ६ वर्ष पहिले उनले छोरीलाई जन्म दिइन् । केही वर्षपछि बिदा मनाउन उनी जर्जिया गइन् । यस भ्रमणमा उनको भेट ग्यालिपसँग भयो र प्रेम बस्यो । ग्यालिपका अनुसार क्रिस्टिना हाँसिरहने र लजालु स्वभावकी छिन् ।
मंगल ग्रहमा अक्सिजनको लागि रुख रोप्दै वैज्ञानिक !
बोकाले दूध दिएपछि डाक्टर हैरान !
भागेकी श्रीमती फर्काइदिन माग गर्दै रुखमा चढेर ८ घण्टा धर्ना